Archive du 19-mai-2022
Vahoaka Malagasy Tratry ny fanabadoana manara-penitra
“Ny fanabeazana no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra raha te hampandroso firenena”, hoy i Nelson Mandela, ilay mpitari-tolona niady tamin’ny fanavakavaham-bolon-koditra, ary efa Filoham-pirenena Afrikanina Tatsimo teo aloha.
Olan’ny oniversite, mitady ho lasa olan’ny firenena tsy ahitam-bahaolana mahomby.Firifiry kosa izay hetsika sy fitakiana izay dia mbola tsy fatatra ihany ve hoe aiza no fototr’olana.
Kempo Submission Tompondaka eran-tany i Lova Randrianasolo
Ilay Malagasy Lova Randrianasolo no voahosotra ho tompondaka eran-tanin’ny taranja haiady Kempo Submission tamin’ity tompondaka eran-tany andiany faha 18 ity izay natao tany Tonizia ny 12 hatramin’ny 16 mey teo.
Mikatso indray ny oniversite Manome 72 ora ny fanjakana ny SECES Antananarivo
Hanao fitokonana fanairana manomboka anio ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka, sampana Antananarivo, na SECES Antananarivo,
Madagasikara Mbola Repoblika sadasada hatreto
Mason-tsivana maromaro no mamaritra sy voafaritra ao anatin’ny maha Repoblika: fahaiza-mitantana, mangarahara, fanajana ny demokrasia, fanjakana tan-dalàna, fitsinjaram-pahefana, fitantanana mahomby,...
Oniversiten’Antananarivo Mandrahona hanao fihetsiketsehana ihany koa ny mpianatra
Mandon-databatra ireo Fikambanan’ny mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo ankehitriny eo anatrehan’ny olana samihafa miteraka fitarazohan’ny fampianarana.
Paul Rabary “Izay mitondra resaka mirefarefa no lasa andrasan’ny vahoaka”
Tsy miroso amin’ny fitondrana jadona i Madagasikara ary tsy hisy intsony eto Madagasikara, hoy ny mpahaifiarahamonina politika, Paul Rabary, taorian’ny hetsika 1991.
Musical Marvel Competition Laharana faharoa i Betia
Ilay teratany Malagasy Betia Harimalala Rakotomananjo no nahazo ny laharana faharoa tamin’ilay fifaninanana iraisampirenena eo amin’ny mozika « Musical Marvel Competition », andiany faharoa.
Tsara aloha rehefa tonga saina hoe adidy ny fanofanana arak’asa sy fampananan’asa ny tanora,Fa ny mahagaga dia hoe izao vao manaitaitra izany indray.